आखिर किनाभयो हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेल दम्पत्तिको डिभोर्स ! यस्तो छ हाँसो भित्रको आँसु(भिडियो सहित) | NewsSudur
आखिर किनाभयो हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेल दम्पत्तिको डिभोर्स ! यस्तो छ हाँसो भित्रको आँसु(भिडियो सहित)
मनोज र उनकी पत्नि मिनाले केही समय देखिको आपसी असमझदारीलाई समझदारीमा टुङ्गयाएका छन् । विशेष स्रोतका अनुसार मनोज र मिनासँगै दुवै पक्षको पारिवारिक सहमति र सल्लाहपछि उनीहरु व्यवहारिक, कानुनी र आर्थिक रुपमा अलग–अलग भएका हुन् । सम्बन्ध विच्छेदको कारणका बारेमा हालसम्म दुवैले मुख खोलेका छैनन् । बुझिए अनुसार विचारमा असहमति भएको हो । त्यसैले दुवैले कारण सार्वजनिक गर्नु पर्ने कुनै तर्क छैन भनिरहेका छन् । केही हप्तादेखि मनोज र मिना अलग–अलग बस्न थालेका थिए । कानुनी रुपमा यही पुस ११ गते अलग भएपछि मनोज गजुरेल छोरासँग बालकोट घरमा बस्दै आएका छन् भने मिना छोरी मेमोरी गजुरेलसँग नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएकी छिन् ।
२०५३ सालमा सुरु भएको थियो वैवाहिक यात्रा – २०५२ सालमा पहिलो पटक भेट भएर केही समय एक अर्काको प्रेममा रमाएको यो जोडीले २०५३ सालको वैशाखमा काठमाडौंको गुहेश्वरी मन्दिरमा विवाह गरेका थिए । पुतलीसडकमा पसल गर्ने क्रममा मनोजले मिनालाई पहिलो पटक देखेका थिए । देख्दादेख्दै मिना मनोजलाई मन पर्न थालिन् । खासमा मिना मनोजको पसल अगाडिको एउटा अफिसमा काम गर्थिन् । यही क्रममा मनोजले मिनालाई भेट्ने अवसर पाएका थिए ।